iOS 10.3.3 vs iOS 11 beta 9, kumhanya bvunzo | IPhone nhau
iOS 10.3.3 vs iOS 11 beta 9, kumhanya bvunzo
Pane nguva shoma uye shoma yevakomana vanobva kuCupertino kuvhura vhezheni yekupedzisira yeIOS 11, vhezheni yanga iri mumaoko evanogadzira kubvira kutanga kwaJune, uye nevashandisi veveruzhinji beta chirongwa kubva kupera kweizvozvo mwedzi mumwe chete. Kubva payakatangwa, iyo yazvino vhezheni yeIOS yakachinja zvakanyanya, kugadzirisa mune yega yega vhezheni yechokwadi, kuwedzera kune kuwedzera mitsva mabasa anga asingawanikwe mune yekutanga betas. Kana nhasi usiri kuyedza beta yeIOS 11, asi iwe uchida kuwana pfungwa yekumhanya sei, ipapo ndinokusiira mavhidhiyo akati wandei kubva kuAppleBytes kuti ugone kutarisa zvese paPad Air uye pa iyo iPhone 6s kushanda kwayo.
Huru hutsva hwatinowana muIOS 11, hunopinda nesu kuburikidza nemaziso, nekuti aesthetics mazhinji emuno mafomu akachinja, kupa zvakanyanya kukosha kuzita rekushandisa. Iyo yekudzora nzvimbo yakagadziriswazve zvakakwana, ichitibvumidza kugadzirisa zvese zvinhu zvinoonekwa mukati mayo, pamwe nekusanganisa bhatani rinotibvumidza kurekodha iyo skrini zvakananga tisina kubatanidza iPhone yedu kana iPad kune komputa.
Nezve mashandiro, mumavhidhiyo ese ari maviri isu tinogona kuona seOS 10.3.3, yazvino vhezheni yepamutemo yakasainwa naApple, bhuti kubva pakutanga munguva shoma pane iOS 11. Nezve iyo nguva yekumhanyisa mashandisiro, iOS 11 inoratidza kunonoka kudiki, kunonoka kwakadzikiswa zvakanyanya kana tikazvienzanisa neyokutanga vhezheni. Mune akawanda emabhukumaki akaurayiwa pamidziyo ine iOS 10.3.3 uye iOS 11 beta 9 akafanana chaizvo, aine marginal yekukanganisa 1-2%, saka hatitarisire kuti yazvino vhezheni yeIOS 11 inotora hupenyu hwechipiri kune yedu kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 10.3.3 vs iOS 11 beta 9, kumhanya bvunzo
Ndichiri paIOS 9. Chikonzero chiri nyore: yega yega iOS inononoka kupfuura yapfuura.
Uye muIOS 11 zvinonyadzisa kuti vanoita izvi. Iyo inofanirwa kuve yakagadziridzwa kwazvo kune makumi matanhatu emidziyo michina.
Uye sezvo shanduro dzichienda, iwe unorasikirwa nehunyoro uye nekugadzirisa. Wechipiri apa, wechipiri ipapo, uye kana iwe ukaona iyo iPhone 6 ine fekitori iOS uye ichangoburwa, iwe unoshamisika kuti chii chave dinosaur chave.
Iyo HomePod ichave iine kurira-kwakavakirwa pairing system
Philips inosvitsa nyowani nyowani yeiyo Hue mwenje renji